حياتك الجديدة4| New Muslim Guide
Home › तपाईंको नयाँ जीवन › حياتك الجديدة 4
इस्लामपछि नाम परिवर्तन गर्नु जरुरी छैन। पुरानो नामलाई निरन्तरता दिनु नै उचित हो, किनभने सहाबाहरुको युगमा नाम परिवर्तन गर्न चलन थिएन। धेरैजसो मानिसहरु इस्लामपछि आफ्नो गैर-अरबी नाम नै बाँकी राखे। तर नामले गलत अर्थ बोकेको छ भने परिवर्तन गर्नु पर्छ।
उपर्युक्त अवस्थामा सन्देहपूर्ण नामहरुलाई राम्रो र सुन्दर नामले परिवर्तन गर्नु पर्छ, किनभने मुस्लिमले जीवनको कुनै पनि अवस्थामा काफिरको अनुसरण गर्नु हुँदैन।
यसलाई अनिवार्य रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्छ।
के गैर-मुस्लिमहरुको कुनै धार्मिक पहिचान वा प्रतीकको रुपमा प्रसिद्ध नाम छ ?
शंका निवारण र उनीहरुको समान हुनबाट जोगिनको लागि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
गलत अर्थ भएको नाम त होइन, जसले गर्दा अरुले घृणा गर्छ ?
राम्रो अर्थ लाग्ने सुन्दर इस्लामि नाम राख्नु मुस्तहब हो।
होइन- यदि पुरानो नामले कुनै गलत अर्थ प्रकट हुँदैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन, किनभने सहाबाहरुको युगमा नाम परिवर्तन गर्ने चलन थिएन। धेरैजसो मानिसहरु इस्लामपछि आफ्नो गैर-अरबी नाममा नै बाँकी रहे। बिना कारण पनि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जस्तै… अब्दुल्लाह र अब्दुर्रहमान, राम्रो अर्थ बोकेको अरबी नाम राख्नु।
खतना गर्नु अति उत्तम हो, किनभने यसमा धेरै स्वास्थ्यलाभहरु छन् तर यो इस्लाममा प्रवेश गर्ने कुनै शर्त होइन। यदि कोही व्यक्ति डरले वा कुनै कारणले खतना गर्दैन भने कुनै पाप लाग्दैन।
اगुप्ताङ्गका रौं खौरनु- गुप्ताङ्गहरुको वरपर रहेको रौंहरुलाई खौरनु वा कुनै तरिकाले सफा गर्नु।